narathein - ကဗျာ
မြင့်မြတ်တဲ့ “ ဗိုလ်အောင်ဆန်း ” ရယ်
အမြဲစီးဆင်းနေရစ်မယ့် “ ဧရာဝတီ ”ဖြစ်ပါတယ်။
“ ရိုးမ ” လည်းဖြစ်ပါတယ်။
“ ဧရာဝတီ ” လိုအမြဲစီးဆင်းပြီး
“ ရိုးမ ” လိုအမြဲထာဝရရပ်တည်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
“ ဂန္ဒီကြီး ”
“ အန်ကယ်ဟို ”
“ ဒေါက်တာရီဇော် ”
“ မော် ”
“ အောင်ဆန်း ” ဆိုတဲ့ အလင်းရောင်ထွန်းလင်းခဲ့လို့
“ ဗိုလ်အောင်ဆန်း ” တဲ့
မိုးဃ်းဇော်၊ ပိတောက်ပွင့်သစ် စာပေအနုပညာမဂ္ဂဇင်း၊ အမှတ် ( ၂၃ )၊မတ် ၂ဝဝ၉
cry of the victims
beyond Nargis in anger
down with rude junta
♦ မြင်သမျှ ကြားသမျှ
♦ အသွေးအသားထဲက စကား
ဘုရား ၊ဘုရား၊ ဘုရား
လူပေါင်း ၁ သိန်းကျော်
နောက်ဆက်တွဲ လုပေါင်းဒီ နှစ်ဆတဲ့
♦ ရဟန်း သံဃာကို
♦ ကျောင်းကန် ဘုရားပေါ်မှာ
တောင်းပန်နေတဲ့ စစ်အုပ်စုအတွက် နမိတ်ကြီး
♦ မိခင်တို့ရဲ့ ငိုကြွေးသံနဲ့
ဒီတခါ အမိမြေမှာ စစ်ဗိုလ်ချုပ် အလောင်းတွေသာ
သင့်ကောင်း(၉. ၉ . ၀၈)
ရွှေဝါရောင် (၁) နှစ်ပြည့်သို့
ငါတို့ ကိုးကွယ်တဲ့ ဆင်းတုကို
ငါတို့ဦးညွှတ်တဲ့တရားကို
ငါတို့ ဝပ်တွားတဲ့ ဝတ္တကမြေကို
ကျည်ဆန်နဲ့ မီးလောင်တိုက်သွင်းသူ ။
တွေ့ ရာအုတ်ခဲနဲ့ငါတို့ ပြန်ထုတယ်
ဒါ… အကြမ်းမှုတဲ့လား ။
ယူသန်…. ယူသန် လို့ ခေါ်မယ် ။
ရေနစ်နေတဲ့ ခေတ်တခေတ်ဟာ ငါတို့ ဖြစ်တယ် ။
► တရာသီလုံး ပွဲကျပ်ချည်းကစားနေရပြီး0
် ► တဘ၀လုံးတက်
လူ့သဘာဝရဲ့အလှဆုံး ခံစစ်ရှင် ။
ဲ့ နရသိန် နဲ့အိမ်ကွင်းကစား ပြီး
ရိုးအီနေတဲ့ ညစာနဲ့ နံနက်စာများ
စိတ်ဓါတ်ဆိုတာ ရော်ဝါရွက်လို ကြွေလွင့်သွားဖို့မဟုတ်၊
သင့်ကောင်း ခရီးသွားဒိုင်ယာရီ နှင့်သူရဲကောင်းစစ်စစ်
၁၉၉၀ မတ်လ အင်းစိန်ထောင်(၆) တိုက်တွက်ကျဆုံးသွားသောလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်
အောင်ဝေး (မြန်မာနိုင်ငံကဗျာဆရာ) အနှစ် နှစ်ဆယ်အတွက် ပါဒများ